AmaZulu ayakhonya eMsunduzi – Msunduzi News
USuthu luzibule ngoMsunduzi Cup ngokushaya iBidvest Wits kowamanqamu
IQEMBU AmaZulu FC linqobe umqhudelwano, iMsunduzi Cup, obewubhekwe ngabovu. Bekuwumncintiswano wokuzilungiselela isizini ezoqala maduze obudlalwa ngamaqembu esifundazwe iKwaZulu-Natal adlala kuPremier Soccer League (PSL). Abalandeli bathole ithuba lokubona abadlali abasha abasayinisiwe emaqenjini abo.
Umqhudelwano awuqalanga kahle kubalandeli baseMgungundlovu ngesikhathi iqembu labo iMaritzburg United lihlulwa AmaZulu ngama-2/1. Kulo mdlalo umqeqeshi u-Eric Tinkler ubebophele abadlali abaningi abasha esebenzisa izindlela ezehlukene zokudlala ngaleli qembu lakhe abelihlola.
Yize iMaritzburg United igqashule kuqala yavula inkundla ngegoli lokuqala lomncintiswano elibekwe enethini nguThabiso Kutumela emzuzwini we-12, AmaZulu akwazile ukulinganisa ngegoli likaLehlohonolo Majoro, osanda kusayina kuwo, sekusele umzuzu kuyiwe ekhefini. Igoli likaMajoro likhuthaze ezikaCavin Johnson zalibeka enethini ngonyawo lukaNhlanhla Vilakazi ngomzuzu wama-52 okuyilona ezinqobe ngalo.
Umdlalo wesibili ubunzima lapho iBidvest Wits ibibophele abasanda kusayina okungoSiyanda Zwane, uSameengh Doutie noZitha Macheke. Ulibeke phakathi ngekhanda uMacheke, okade ekuChippa United, ngomzuzu wama-69 kwaba wukuguqa kwayo iGolden Arrows, Abafana Bes’thende, yadlulalela kowamanqamu kanjalo iWits. Kowomanqamu phakathi kweWits na-Amazulu uTalent Chawapihwa ushiye unozinti weWits enkemile ngomzuzu we-18 kwaba ngelilodwa eqandeni. Sekusele imizuzu eli-18 uBongi Ntuli wa-Amazulu wafaka itswayi enxebeni leWits kwaba ngamabili eqandeni. Yize uTerrence Dzvukamanja eshaye elokubika leWits besekuvele sekonakele futhi selishonile adlula kanjalo Amazulu ngama-2/1 eba ngompetha be-Inaugural Msunduzi Cup.
Emveni komdlalo wokuqala uSihlalo weMaritzburg United uFarook Kadodia uthe yize behluliwe kowandulela amanqamu kodwa kube yigalelo elihle lapho bebehlola khona abadlali abasha kanye nokubona abasavivinywa njengoThamsanqa Sangweni, uDaylon Classen noYeboah Koffi waseGhana. “Wumqeqeshi uzothatha isinqumo ngabadlali abebevivinywa,” kusho uKadodia.
Previous post: Ithelekile iMsunduzi Cup
Next post: Olwekhilikithi eSweetwaters seluhlomule ngobuchwepheshe